Chinyorwa Munyu Uye Pepper Ekukuya Vagadziri | China Chinyorwa Chinyorwa Munyu Uye Pepper Kukuya Fekitori & Vatengesi
Fekitori Zvakananga 100ml Inoraswa Chinyorwa Munyu Uye Pepper Grinder
Mhiripiri miriwo inowanzo kuve yakakamurwa kuita maviri masitayera: echinyorwa mhiripiri zvigayo uye emagetsi mhiripiri zvigayo. Iwo echinyorwa mhiripiri zvigayo pamusika zvakakamurwa kuita zvinogadziriswa uye zvisiri-zvinogadziriswa zvinoshanda.
Mugayo wemunyu uye mhiripiri pakutanga wakashandiswa zvishoma mumakicheni eChina, asi ikozvino dzimba zhinji uye dzemazuva ano dzinotanga kuushandisa. Asi zviri nyore chaizvo kukuya mhiripiri, munyu uye mhiripiri. VokuMadokero vanoteerera kuchena. Vagari vekare vekuMadokero vanofunga kuti mushure mezvose, zvinogadziriswa mumafekitori, uye zvinhu zvakasiyana zvinogona kusanganiswa mazviri. Naizvozvo, hazvishamise kuti kune akawanda anogaya patafura yekicheni yemhuri yega yega.
Kufananidza, kukuya chinhu chinoshanda chinoshandura zvinhu zvakaomarara kuita zvidimbu zvidiki. KuChina, kutanga kukuya kwanga kusingashandisirwe tsanga chete asi kwaishandiswawo kumushonga, asi chikafu muchikafu chaive "nousimbe" zvishoma. Iyo-mhiripiri.